Mask yeRose: yerudo inoonekwa inoano senge hapana imwe | Linux Vakapindwa muropa
Mugadziri Failbetter Mitambo yakatogadzira mitambo mikuru, senge Gungwa risina Zuva, Matenga Asina Zuva uye yakakurumbira browser rondedzero mutambo Fallen London. Iye zvino vaburitsa zita uye zvimwe zvinhu zveiyo inotevera vhidhiyo mutambo weprojekti. Yakatumidzwa zita Mask yeruva, uye inovimbisa kuve inonakidza rudo yekuona inova ...
Inoita se prequel kune yake mimwe mitambo yakatarwa muFallen London universe. A yerudo yekuona inoiswa yakagadzwa muna 1862. Uye sekureva kwemusimudziri iye, chimiro chehunyanzvi chavakasarudza kumutambo wevhidhiyo chakafemerwa zvikuru neafirimu mafirimu, kutora mafirimu eVictorian uye nguva yeBlitz yeGreat Britain, zvichitevera zvishoma shanduko yezvakatanga muFallen London, asi iine rumwe ruzivo uye kudzika kwemaitiro.
Iyo nyaya ichaitika pasi pevhu, mushure mekubatwa, pamwe nezvimwe mavara uye nhevedzano yezvinetso. SaArchie, mudzidzi wekurapa anoona mashandiro anoita rufu zvakasiyana pano; Griselda mubatsiri; Horatia, muridzi wemba ane nzvimbo yakapfava yevagari vemuNeath; naHarjit, mumiriri wemuno achitsvaga munhu asipo. Nezvose izvi, iwe une zvigadzirwa zvinonaka kwazvo kuti nyaya ibudike, iine mamwe maitikiro asingatendeseki, uye musambo wakanaka uye rondedzero.
Asi kuti zvese izvi zvive zvechokwadi, Kickstarter mushandirapamwe unotanga kudiwa kutanga muna Kukadzi 2021. Failbetter ine chinangwa chekuunganidza mari yakakwana kuti izvigadzirire. Uye zvakare, ivo vakasimbisa yavo Linux rutsigiro, semitambo yayo yapfuura, uye kuti iwe uchave unowanikwa pane GOG uye Steam, kana nguva yacho yasvika.
Tichave takamirira rumwe ruzivo nezve izvi chirongwa chinonakidza. Parizvino hapana zvakawanda zvakawandisa zvinozivikanwa. Asi, neizvozvo chete, zvinotaridzika zvakanaka… Kunyanya kune ma gamers vari kutsvaga zvinopfuura zvekungonakidza mutambo, uye vanosarudza zvakadzama zvishoma kunyaya uye nehunyanzvi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Mask yeRose: yerudo inoonekwa inoano senge hapana imwe
NethServer 7.9 inouya zvichibva paCentOS 7.9, DNS query ichivhara uye nezvimwe